Q&A ho an'ny Sinocare SARS-CoV-2 Antibody Test Strip-News-Sinocare
Q&A ho an'ny Sinocare SARS-CoV-2 Antibody Test Strip
Fotoana: 2020-05-08 Hits: 194
1. Ahoana no hamantarana ireo tranga voamarina?
Ny tranga mampiahiahy amin'ny iray amin'ireto porofo etiolojika na serological manaraka ireto:
a. Ny RT-PCR fluorescent amin'ny fotoana tena izy dia manondro miabo amin'ny asidra nokleona coronavirus vaovao;
b. Ny filaharan'ny fototarazon'ny virus dia tena homolojika hahafantarana coronavirus vaovao
d. Ny tsimokaretina NCP IgM sy IgG voafaritra dia azo tsikaritra ao anaty serum; IgP voafaritra virus virus NCP dia
azo tsikaritra na mahatratra titration fisondrotana 4-farafaharatsiny farafaharatsiny raha oharina amin'ny dingana maranitra.
2. Inona no dikan'ny hoe manana valim-panadinana tsara aho?
Raha manana valin'ny fitsapana tsara ianao dia azo inoana fa manana izany ianao vIrus. Noho izany, azo inoana koa fa mety hapetraka mitokana ianao mba tsy hampielezana ny viriosy amin'ny hafa. Na izany aza, noho ny akora fanelingelenana loharano tsy fantatra, ny valin'ny fitsapana dia mety mbola miabo izay antsoina hoe diso-miabo. Ny mpitsabo anao dia hiara-miasa aminao mba hamaritana ny fomba hikarakaranao anao tsara indrindra arakaraka ny valim-panadinana miaraka amin'ireo anton-javatra hafa amin'ny tantaram-pitsaboanao, sy ireo soritr'aretina anananao, ny mety ho fitrandrahana ary ny toerana misy anao sy ny toerana misy anao izao.
3. Inona no dikan'ny hoe manana valim-panadinana ratsy aho?
Ny valin'ny fitsapana ratsy dia midika fa ny antibody ateraky ny vIrus tsy hita tao amin'ny santionanao. HO AN'NY vIrus, valiny fitsapana ratsy ho an'ny santionany voaangona raha misy olona manana soritr'aretina mazàna midika izany vIrus tsy nahatonga ny aretinao tato ho ato.
Na izany aza, azo atao ity test ity ny manome valiny ratsy izay tsy mety (diso diso) amin'ny olona sasany miaraka aminy vIrus. Midika izany fa mety mbola hanana ianao vIrus na dia ratsy aza ny fitsapana. Raha izany no izy, ny mpitsabo anao dia handinika ny valim-panadinana miaraka amin'ny lafiny hafa rehetra amin'ny tantaram-pitsaboana (toy ny soritr'aretina, ny fambara mety hitranga, ary ny toerana misy ny toerana misy anao izao) amin'ny fanapahana hevitra ny fomba hikarakaranao anao. Zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny mpitsabo anao mba hanampiana anao hahatakatra ny dingana manaraka tokony hataonao.
4. Nahoana aho no tokony hampiasa an'ity vokatra ity?
Amin'izao fotoana izao, ny fomba fitiliana be mpampiasa indrindra dia ny fitsapana asidra nukleika, saingy io teknika io dia voaporofo fa tsy afaka mamantatra ireo mpitatitra virus rehetra, indrindra rehefa mizaha toetra ny santionan'ny fantsom-pisefoana ambony ampiasaina. Ho an'ny tranga voamarina dia indraindray fanandramana marobe sy fanandramana misy santionany marobe no ilaina hahazoana vokatra tsara. Ary misy ny toe-javatra misy mararin'ny marary ahiahiana be tsy afaka mahazo vokatra tsara amin'ny fitsapana asidra niokleika. Misy antony efatra mety hitranga:
1) ny enta-mavesatra viralin'ny santionan'ny lalan-pisefoana ambony dia ambany lavitra noho ny an'ny santionan'ny lalan-pisefoana ambany ao vIrus marary
2) ny famoahana viralin'ny marary amin'ny dingana mararin'ny aretina dia miovaova arakaraka ny sakany;
3) ny fanangonana ny santionany swab avo lenta dia mitaky mpiasa ara-pahasalamana mahay;
4) Ireo reagents PCR avy amin'ny loharano samihafa dia samy hafa be.
Ireo olana etsy ambony ireo dia miteraka fanamby lehibe amin'ny fanomezana fitsaboana ara-potoana sy fitokisana. Ilaina tokoa ny mamantatra ny serôlôjia.
Ny maha-zava-dehibe ny lanjan'ny klinika sy ny sandan'ny detection serological ho an'ny vIrus manaraka izao ny faritra:
1) ho an'ny tranga ahiahiana ho fitsidihan'ny biraon'ny dokotera voalohany sy ny tranga voamarina miaraka amin'ny diagnostika klinika fa raha tsy misy ny fitiliana asidra nokleôly virus, dia azo ampiasaina ho valin'ny fitsaboana ny vIrus;
2) ho an'ny fifandraisana akaiky mahasalama misy valiny tsara amin'ny antibody, dia tokony horaisina ho toy ny mpitatitra mety hitranga izy ireo, manitatra ny vanim-potoana fandinihana mitokana, manatsara ny faharetan'ny fitsapana asidra nokleika, mampitombo ny karazana santionany ho an'ny fitsapana asidra niokrika, ary manatanteraka ny famotopotorana akaiky;
3) ny marary notsapain'ny asidra nokleôly virus, ny valin'ny valin'ny fiovan'ny vatan'ny serum dia manondro fa ny valin'ny hery fiarovana manokana dia natsangana tao amin'ny vatana, izay afaka manampy ny dokotera hitsara ny fifandraisan'ny hery fiarovan'ny vatana sy ny fivoaran'ny aretin'ny marary aorian'izay;
4) ampiasaina amin'ny fanombanana be dia be ny haavon'ny antibody serum amin'ny mararin'ny parasy, ary anisany ny plasma antibody titer avo azo ampiasaina amin'ny fitsaboana marary mafy;
5) mitambatra amin'ny fanandramana asidra nokleôly virus hahafantarana ireo mpitatitra virus mety ho isan'ny mponina lehibe, toy ny mpandeha amin'ny firenena na faritra misy ny valanaretina, ireo mpandray anjara amin'ny fivoriana na hetsika lehibe, ary ireo olona miverina miasa na mianatra. Manokana sy manara-maso ireo olona manana asidra nukleus virus fa miiba ny antibody, mba hahitana ny mety ho vitany vIrus areti-mifindra ara-potoana, mampihena ny risika fandefasana.
Pejy mialoha: Fampiasana an-tsitrapo ho an'ny fanandramana Virus IgM-IgG ANTIBODY TEST
Pejy manaraka: Torohevitra 5 ho an'ireo diabeta voan'ny valanaretina Virus